Slider CSS 27 sy HTML hampitahana sary, karatra ary maro hafa | Famoronana an-tserasera
Slider HTML HTML sy CSS 27 hanomezana ny tranokalanao izay mikasika manokana
Manuel Ramirez | | CSS, teknolojia
Manohy amina fehezan-dalàna CSS sy HTML izay azo ampiharina amin'ny tranokalanay izahay hanomezana azy io fifandraisana manokana hanavahana azy amin'ny ambiny. Misaotra ny fanaraha-maso + c miampy ny fanaraha-maso + v azonay atao manana ao amin'ny kaody tananay izay hahatonga ny tranonkala ho vonona havoaka amin'ny fampandrosoana aorian'ny fandaniana andro na herinandro amin'ny fitiliana.
Izao no fotoana ho an'ireo mpikorisa 27 amin'ny HTML sy CSS izay hahafahantsika manomana an'io toerana io izay ampidirinay matetika ao anaty pixel vitsivitsy toradroa. Ireo slider ireo dia manomboka amin'ny karatra, mampitaha, efijery feno, mamaly ary ny tsotra indrindra, fa miaraka amin'izay koa tena kanto. Handeha slider 27 izahay izay tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha, indrindra ny mpanjifa na mpampiasa mandalo ny tranonkalanao hamaky atiny, mividy vokatra na mampiasa slider fampitahana fotsiny hampitahana sary alohan'ny sy aoriany.
1 Pikantsary amin'ny karatra
2 Slider karatra fampahalalana
3 Slider sary mampitaha
5 Slider sary mampitaha telo sosona
6 Vanilla JS Image Slider
7 Asio fizarana diagonaly
8 Slider efijery feno
9 Slider marindrano misy paralaks
10 Slider fomba fijery 3D malama
11 Slider efijery feno mahery fo
12 VELO.JS slider misy sisintany
13 Slider mitsangana CSS mamaly miaraka amin'ny sary kely
14 Slider boatin-tsary
15 Motion Blur miaraka amin'ny sivana SVG
16 Slider mihetsika
17 Slider sary miaraka amin'ny lamina SVG
18 Slider sosona tsotra
19 Slider CSS madio
20 Slider CSS ihany ny cupcake
21 Vokatry ny sary mihetsika Slider
22 Slicer slice
23 Slider Parallax NY
24 Popout slider
25 Slider misy vokarin'ny ripple
26 Slider miaraka amin'ny topi-maso amin'ny sary
27 Sliders tetezamita
Pikantsary amin'ny karatra
Slider karatra fampahalalana
Slider sary mampitaha
Ity slider ity dia Tena mahasoa ary azo antoka fa efa hitanao tamin'ny tranokala marobe izany raha oharina amin'ny tsipika mitsangana izay mihetsika mitsivalana ny sary teo aloha sy aoriany. Izy io dia fanampiana lehibe amin'ny fampitahana, noho izany dia ataonay ho iray amin'ireo tena ilaina ao amin'ity lisitry ny slider ity.
Slider sary mampitaha telo sosona
Vanilla JS Image Slider
Asio fizarana diagonaly
Slider efijery feno
Slider marindrano misy paralaks
Ho an'ny mpankafy ny paralaks vokar'ity slider ity miaraka amin'i Swiper.js, HTML ary CSS. Ankoatry ny fahafahantsika misosa miaraka amin'ireo bokotra roa miorina amin'ny lafiny roa, eo amin'ny ilany ankavanana dia ananantsika amin'ny sary kely rehetra ny carousel feno. Slider sary hafa sy avo lenta izay tsy hamela na iza na iza mitsidika ny tranonkalantsika tsy miraharaha.
Slider fomba fijery 3D malama
Slider efijery feno mahery fo
VELO.JS slider misy sisintany
Iray amin'ireo fijoroana an-tsehatra ho solo-tsipika feno miaraka amina sary mihetsika mahafinaritra fotsiny. Manoro hevitra anao izahay handeha hijery azy io eo am-piasana mba hanombohana mieritreritra ny fomba fampiharana azy amin'ny Internet. Mampiasà effets Velocity Mba hanatsarana an'io sary mihetsika io izay mampiasa bokotra zana-tsipìka, tsindrio iray eo amin'ny fitetezana ary manodinkodina aza, tonga lafatra fotsiny.
Slider mitsangana CSS mamaly miaraka amin'ny sary kely
Miroso amin'ny slider isika CSS mamaly amin'ny finday kalitao tsara toa an'ity. Hanana andian-tsary kely eo ankavanana ianao, rehefa hanery anao dia hanomboka sary mihetsika amin'ny fianjerana mitsangana. Fiantraikany lehibe izay tsy mampiasa afa-tsy CSS mba hamelatra ny mpikorisa tsara indrindra amin'ity lisitra ity.
Motion Blur miaraka amin'ny sivana SVG
Slider sary miaraka amin'ny lamina SVG
Iray amin'ireo andrana hafa manandrana mitondra modely svg mamorona sary sarontava ho an'ny mpikorisa CSS. Izy io dia mamokatra vokarin'ny blur tena manaitra miaraka amina famaranana lehibe. Iray amin'ireo mpikorisa ireo handrisika ny fahatsapana tsara ao amin'ilay mpitsidika ny tranonkalantsika.
Slider sosona tsotra
Slider CSS madio
Iray amin'ireo mpikorisa tsotra indrindra izay CSS madio. Iray amin'ireo tombony azo apetraka ao amin'ny ambany namela andiana teboka izany dia ho toy ny bokotra hahatratra ny sary tsirairay izay handalo eo alohanay nefa tsy misy sarimiaina manokana.
Slider CSS ihany ny cupcake
El slider mamy indrindra amin'ny lisitra ary ao amin'ny CSS sy HTML ihany izy io. Iray amin'ireo miavaka indrindra amin'ny lisitra iray manontolo ny manana eo amin'ny ilany ankavanana ny fiovana isan-karazany cupcakes. Tsindrio ny iray ary mipoitra ny cupcake miaraka amina sary mihetsika mahafinaritra izay miafara amin'ny vokam-boka lehibe. Iray amin'ireo tsara indrindra tsy misy fisalasalana.
Vokatry ny sary mihetsika Slider
Un slider tetezamita izay mampiasa kilasy manampy tsotra ary izany dia miavaka amin'ny sary mihetsika tena malama mba ho lasa iray amin'ireo tianao indrindra amin'ity lisitra ity. Raha te-hanavaka ny tenanao amin'ny kinova finday amin'ny tranonkala ianao dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra izany. Fifampiraharahana tsara amin'ny fahitana.
Slider Parallax NY
Miaraka amin'ny fomba minimalista aseho ity slider ity izay mivoaka isaky ny ampahany amin'ny sary isaky ny slide. Tena mamorona sy hafa amin'ny zavatra hita ao amin'ny lisitry ny mpikorisa sy izay mijoro amin'ny toerany.
Slider misy vokarin'ny ripple
Slider miaraka amin'ny topi-maso amin'ny sary
Slider GSAP miaraka amin'ny topy mason-tsary ireo sary ho avy hatolotra ny mpampiasa izany. Tonga lafatra amin'ny fanaovana maodely amin'ny tranonkala lamaody na endrika endrika.
Hofaranantsika amin'ny a Slider avo lenta misy vokany baomba ary andiana sary mihetsika izay mahazo an'io fifandraisana manokana amin'ny tranokalanay io. Ny effets parallax dia azo ahetsika.
Aza adino ity lisitra kaody CSS iray hafa ho an'ny bokotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » CSS » Slider HTML HTML sy CSS 27 hanomezana ny tranokalanao izay mikasika manokana
Endrika CSS 40 izay mety tsy ho hita amin'ny tranokala rehetra
Mianara mamorona karazan'endrika ao Indesign ary maneso ny matihanina